Soomaliya – Page 2 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ October 18, 2019 ] DAAWO:- Sheikh Axmed Mursal wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee dhir ku beera Villa Somalia “65 Sano ayuu shaqeeynayay”.	Faalloyinka
[ October 18, 2019 ] AKHRISO:- RWasaare Aby Ahmed oo awaamir gaaraya 7qodob kusoo rogay deegaanada Somalida iyo Canfarta dalkaasi.	Faalloyinka
[ October 18, 2019 ] SAWIRO:- RWasaare Kheyre oo si aan caadi ahayn uga qayb galay shirka IMF iyo Bankiga aduunka.	Faalloyinka
[ October 18, 2019 ] YAABKA:Kenya oo Nin dhintay sannad ka hor xil Sare U magacowday	Maqal Iyo Muuqaal
[ October 18, 2019 ] Daawo:- Beel degta AWDAL oo qaylo afka furatay “Kaahin iyo Biixi nama gumaysan karaa hubkaanu qaadanaynaa”	Faalloyinka
DAAWO: Denni oo wada qorshe cusub, Xaaf oo ku dhagan Farmaajo, Dagaal cusub, Qaraxyo dhacay Iyo Xiisado ka taagan Jubbaland
October 16, 2019 Ali Osman 0
Madaxweynaha Denni oo wada qorshe cusub, Xaaf oo ku dhagan Farmaajo, Dagaal cusub, Qaraxyo dhacay Iyo Xiisado ka taagan Jubbaland. WARARKA OO DHAN KA DAAWO HALKAAN
SAWIRO:- Axmed Madoobe oo darajo abaalmarin ah siiyay taliyaha Garoonka Kismaayo.
October 16, 2019 marqaan 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa manta oo Arbaco ah waxaa uu dalacsiiyey gaashaanle Sadiiq Maxamuud Dhogor oo kamid ah saraakiisha Ciidamada Jubbaland. Munaasabad kooban oo ka dhacday Xarunta Madaxtooyadda Jubbaland ee Magaalada […]
Wararka aan ka heleyno Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas deegaan ka tirsan xalay lagu gubay gaadiid dhowr ah oo siday Khudaar. Gaadiidka la gubay oo ahaa nooca Soomaalida u taqaano Caasi […]
XOG:- Siyaasiyiinta Khaatuma oo shir xasaasi ah uga socda Muqdisho “Cali Khaliif oo abaabul aan caadi ahayn wada”.
October 16, 2019 marqaan 7
Siyaasiyiin kasoo jeeda gobolada Sool iyo Cayn iyo xubno katrsan dowladda federalka Soomaaliya, ayaa Muqdisho ka wada qorshe ku saabsan in xildhibaanada beesha Dhulbahante ee u matalidoono barlamaanka soo socda lagusoo doorto Muqdisho. Xubnahaan ayaa […]
DEG DEG:Buuhoodle oo xaalad culus lugaha la gashay & Beelo dagaalamaya, kadib markii wasiir ka tirsan Puntland.
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya waxaa Maanta dib ugu soo laabtay qeybtii ugu horeysay wafdigii tegay Magaalada Kismaayo ee ka qeyb-galay xafladii Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh […]
DAAWO:- Hogaamiye Kim Joung Un oo sameeyay dhacdo naftiisa halis gelin kartay….
Hogaamiyaha Kuuriyadda Waqooyi Kim Jong Un ayaa koray buurta wadankiisa ugu dheer isagoo saran Faras, sida ay baahisay warbaahinta Dowladda. Sawirro ay baahisay KCNA ayaa muujiyay Kim oo saaran Faras cas islamarkaana sii koraya buurta […]
Deg-deg:- Sargaal katirsan Puntland oo gowr dhaw lagu weeraray qarax .
Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in qarax lagu weeraray sargaal ciidan oo katirsan Puntland kaasi oo la sheegay in gaarigiisa loogu xiray. Sargaalkaan oo magaciisa lagu sheegay C/Qani Xaabuun, ayaa qarax lagu […]
DAAWO:- Haweenka Boosaaso oo hadalo adag kula hadlay Madaxwaynaha Puntland “Deni wuu fashilmay reer bariguna way fahmeen”.
Qaar kamid ah haweenka kunool magaalada Boosaaso ayaa si wayn uga hadlay jahawareerka siyaasadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyay Kajiray Magaalada iyo meelo badan oo kamid ah Puntland. Haweenkaan oo isugu yimid kulan Qarsoodi ah oo […]
Shuruudaha Ay Somaliland Ku Xirtay Wada-Hadalada Somalia Caqli-Gal Ma Yihiin?
October 16, 2019 marqaan 4
Bishii September 2deedi 2019, ayaa golaha wasiirada Somaliland oo uu guddoominayey madaxweyne Biixi, soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay diyaar u yihiin bilawga wada-hadalo ay la galaan dawladda Xamar, laakiin waxay daba-dhigeen shan […]
DHAGAYSO:15 October 50 Sano Ka Hor Sidee U Dhacay Madaxweyne Cabdirashid Sharma’arke Laascaanood.
October 16, 2019 marqaan 2
50 sano ka hor maanta oo kale, October 15 1969, waxaa toogasho uu fuliyey nin Ilaaladiisa ahaa lagu dilay madxaweynihii hore ee Soomaaliya allaha u naxariistee Cabdirashiid Cali Sharma’arke. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay […]
DAAWO VIDEO :XOG Culus Kacdon xasan.Sh Iyo Sh.Sharif Ka Dhana oo muqdisho ka Socda.
October 15, 2019 marqaan 2
Kacdoon ka Dhan Ah Madaxweynayaashi Hore ee Sheekh Shariif Iyo xasan Sheekh maxamud Iyagoo ku Eedaynaya Shirka Kismaayo iyo Inay kenya Heshiis Kula Yahiin Arinta Kismaayo. Hoos Ka Daawo
Degdeg:- Taliyaha Boliska Somalia oo Seefta galka kala baxay xilalkiina ka xayuubiyay taliyaal muhiim ah.
October 15, 2019 marqaan 1
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayaa xilka ka qaadis iyo Magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Booliska ee ka howlgalla Magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa taliyeyaasha qaarkood u magacaabay xilal Sare […]
Degdeg:- Doon kusoo wajahna Boosaaso oo ku rogmatay Badwaynta Hindiya.
October 15, 2019 marqaan 0
Doon usoo socotay magaalada Boosaaso oo rar ka soo qadaday deked ku taalla dalka Cummaan ayaa la sheegay inay ku degtay xeebaha badweynta Hindiya. Doonidan oo laga lahaa dalka Hindiya ayaa lagu magacaabay Cabdikariin, waxaana […]
Ciidanka DFS oo cabsi aawgeed uga guuray saldhig muhiim ah oo ay kulahaayeen duleedka Muqdisho.
Wararka naga soo gaaraya Degmada Balcad ee Gobolka Shabeelaha dhexe ayaa sheegaya in Ciidamada dowladda Federaalka ah ka guureen saldhig ay ku lahaayeen inta u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar. Ciidamada ayaa la xaqiijiyay in ay […]
DAAWO:- Puntland oo ka hadashay tirada iyo magacyada Maraakiib laga leeyahay dalal shisheeye oo si sharci darro ah uga kaluumeysa xeebaha Puntland.
Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Puntland Faarah Cawaash Oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa shaaciyay tirada iyo magacyada Maraakiib laga leeyahay dalal shisheeye oo kalluumeysi sharci darro ah xeebaha Puntland kawada. HALKAAN KADAAWO […]
DAAWO:- Xisbiyada taageersan DFS oo dhaliilay Shirkii Kismaayo iyo Faragelinta Kenya.
Kulan ay magaalada Muqdisho ku yeeshay in kabadan 20 xisbi siyaasadeed oo kajira somalia ayaa si adag lagu dhaliilay hanaanka loo maray siyaasadda Jubbaland. Xisbiyadaan ayaa cambaareeyay habka shirkaasi loo qabtay iyagoona hadalo adag ku […]
DAAWO:- Askar Jabuutiyaan iyo Somali wada socda oo xasuuq arxan darro ah ka geystay Gobolka Canfarta Itoobiya
Ugu yaraan 17 qof ayaa lagu dilay halka 34 kale lagu dhaawacay kaddib markii Ciidamo wata Dharka Ciidanka Difaaca Jabuuti iyo Booliska Ismaamulka Soomaalida ay weerareen dad Cafar ah oo ku sugnaa degaanka Afambo ee […]
DAAWO VIDEO:Madaxweyne Axmed Madoobe Qudbad Calaacal Jeediyey “Qudbad Hore Looga Baran”
Madaxweynaha Jubbaland Ayaa ka Sheekeyey Taarikhda Soomaaliya Soo martay,Waxaa uu ka Sheekeyey waxa Iyaga Iyo dowlada faderalka Ka Dhaxeeya Khilaafka Ka Taagan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xilligana uu khilaaf xoogan kala dhaxeeya Dowladda […]
AKHRISO:- Muxuu yahay Garoonka diyaaradeed ee ay DFS ka dhisayso Muqdisho “Mala xidhayaa Aadan Cadde Airport”.
Mas’uuliyiin ka kala socotay wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka, maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradaha duulista hawada ee maamul goboleedyada Hir-Shabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa shalay galab kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. Xubnahaas aya kulankooda waxa […]
DAAWO:- MD Madoobe oo soo dabcay sheegayna inuu diyaar u yahay inuu qaato guuldaradiisa.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa uu munaasibad sagootin ah u qabtay martidii uu ku casuumay xafladdii caleemasaarkiisa ee ka dhacday magaalada Kismaayo. Axmed oo khudbad uu halkaas ka jeediyay kaga hadlay […]
Hay’ad caalami ah oo DFS iyo Alshabaab ku eedeysay in ay askareeyaan Caruur aan gaarin da’da qaangaarnimada.
Hay’adda UNICEF ayaa warbxin ay soo saartay ku eedeeysay AL-shabab, dowladda Soomaaliya iyo dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah in ay askareeyaan carruurta. Warbixinta Hay’adda UNICEF oo ay daabacday CAJ, ayaa lagu sheegay in Carruur gaareysa 869 qof […]
DEG DEG: Maxkamadda Dacwadda Badda ee Soomaaliya & Kenya oo ku dhawaaqday war wadnaha gooyay Kenya.
October 15, 2019 Ali Osman 0
Mucaaradka DFS ee kushirsanaa Kismaayo oo guul gaari waayay.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland ayaa sheegaya in aysan wali hogaamiyaasha siyaasadda ee kusugnaa maalmihii lasoo dhaafay magaaladaas soo saarin warsaxaafadeed ay doonayeen in ay wadajir u soo saaraan, kaas oo […]
DF Soomaaliya ma Kacdoon Dhalinyarro ayay ka abaabulaysaa gudaha Puntland?
October 14, 2019 Omar Ali 0
Saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ayaa aad loogu faafiyey wararka la xariira in ay jiraan isku dayo kuwajahan in dhalinyaradda Puntland ay kiciyaan qaar katirsan taageerayaasha Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya, kuwaas oo la sheegay in ay […]
DAAWO:- Sheikh Axmed Mursal wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee dhir ku beera Villa Somalia “65 Sano ayuu shaqeeynayay”.
SAWIRO:- RWasaare Kheyre oo si aan caadi ahayn uga qayb galay shirka IMF iyo Bankiga aduunka.
YAABKA:Kenya oo Nin dhintay sannad ka hor xil Sare U magacowday
Daawo:- Beel degta AWDAL oo qaylo afka furatay “Kaahin iyo Biixi nama gumaysan karaa hubkaanu qaadanaynaa”
DAAWO:- MD Deni oo Reer Bariga kala kulmay soo dhaweyn maqaamkeedu hooseeyo “Barakacayaal la abaabulay”.
DAAWO VIDEO:Xildhibaan Jeesow oo Kabaha La Dulmaray Xasan Sheekh Iyo Sheekh Shariif”Hadii Nin Is Cumaamaday Tageereen Farmaajo Ayaan Ku Caleema Shubayna Mar kale”
DAAWO: Cali Khaliif oo Kasoo Quustay Soomaliland Mar kale Doonaya Bulshada SSC Inuu Marin Habaabiyo
DEG DEG: Aaran-jaanta Puntland oo bahdilaysa Axmed Karaash & Wararkii u dambeeyey
DAAWO VIDEO:Madaxweyne Deni oo Niyad Jabiyey MD Axmed Madoobe Tageero Umuujiyey Dowlada Faderalka.
XOG:Madaxweyne Farmaajo oo Lagu Casuumey Ruushka Iyo Ujeedada
DAAWO VIDEO War Culus Maraykanka oo Awoodisi Gobolka Sheegay Inuu Turkiga Ku Wareejiyey
Maraykanka Ayaa Ka Baxay Dalka Suuriya Waxaana Awooda Gobolka u Muuqataa Inuu Ku Wareejiyey Dalka Turkiga ,kadib Wada Hadal Telefoonka oo Yeesheen Maraykanka Iyo Turkiga. Halkani Hoose Muuqaalka Daawo
Reseacher Fardus:Dispute between Somalia and kenya boarder coast
Fardus presents a woman who researches Somali, Kenya And Somalia maritime issues,Also She confirms Kenya’s claims on the Somali-Kenyan border.
Allha u naxariisto Sheikh Axmed Mursal. Waxa uu Villa Somalia ka shaqeynayay 65 sano oo la soo dhaafay, 1954 oo ku beegan markii calankeenna la saaray ayuu ku soo biiray. geedaha madxtooyada oo dhan isagaa […]
AKHRISO:- RWasaare Aby Ahmed oo awaamir gaaraya 7qodob kusoo rogay deegaanada Somalida iyo Canfarta dalkaasi.
Ra’iisal Wasaaraha Dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa shir iskugu yeeray maamulka labada deegaan ee Soomaalida iyo Canfarta. Shirka oo si gaar ah uga dhacay xafiiska raysal wasaare Abiy Axmed ayaa waxaa goob joog ka ahaa […]
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, ayaa Magaalada Washington ee Caasimadda Dalka Mareykanka uga qeyb galay shirka miiska wareegsan ee Bangiga iyo hey’adda Lacagta Adduunka. Ra’iisul Wasaaraha ayaa khudbad uu shirka ka jeediyay waxa uu […]